एकैदिन यति धेरै संक्रमित थपिएपछि,भोलि देखि यस्तो हुने सबैले हेर्नु होला |
एकैदिन यति धेरै संक्रमित थपिएपछि,भोलि देखि यस्तो हुने सबैले हेर्नु होला
November 23, 2021 November 23, 2021 adminLeaveaComment on एकैदिन यति धेरै संक्रमित थपिएपछि,भोलि देखि यस्तो हुने सबैले हेर्नु होला
बेलायतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण झन् बढेको देखिएको यहाँको स्वास्थ्य अधिकारीहरुले जनाएका छन् । उनीहरुका अनुसार यहाँ अहिले पनि दैनिक कम्तीमा पनि ४० हजार जना यो भाइरसका संक्रमित भेटिएका छन् । सरकारी अधिकारीले दिएको पछिल्लो जानकारीअनुसार यहाँ आइतबार थप ४० हजार जनामा एकै दिनमा संक्रमण भएको छ । यो समेत गरी बेलायतमा अहिलेसम्म संक्रमित हुनेको संख्या ९८ लाख नाघेको छ ।
यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा कोरोना भाइरसका कारण ६१ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै बेलायतमा अहिलेसम्म कोरोनाका कारण करिब एक लाख ४४ हजार जनाको मृत्यु भएको छ । बेलायतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकामध्ये आठ हजार जनाभन्दा बढी अझै पनि अस्पतालमै उपचाररत रहेका छन् ।
यहाँका १६ वर्षमाथिका झन्डै ९३ प्रतिशत मानिसले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन् । त्यसैगरी करिब ८७ प्रतिशतले दुवै मात्रा खोप लगाएका पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर पनि पछिल्ला केही दिनमा यहाँ संक्रमण झन् बढेको पाइएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । सरकारी प्रयासका बाबजुत यहाँ संक्रमित हुनेको दरमा कमी नआएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
ग्यास भन्दा आधा सस्तो हुन्छन बिजुलीबाट चल्ने यी चुलाहरु!कति पर्छ र कस्तो चुलो किन्ने हेर्नुहोस!
अब टिकटक बाटै यसरी पाउँदैछन् ३५ लाखको कार,तपाई पनि यसरी हुनुहोस् सहभागी
विश्वकपका लागि ५ महिना सबै कामदारलाई घर फर्काउने कतार सरकारको निर्णय!कति दिन्छ भत्ता?
फेरि अर्को बज्रपात भर्खरै राजधानीमा अवतरण गर्दा गर्दै विमान दुर्घटना
दुःखद् घटना:बस ट्रकसँग ठो’क्किँ’दा ३७ जनाले ज्या’न गुमाए,१९ जनाको अबस्था गम्भीर!